Ministarri dhimma-alaa Yunaayitid Isteets – Reeks Tilarsan, Ministira haajaa alaa Itoophiyaa wajjin ta'uudhan ibsa harra Finfineetti kennan irratti rakkinaa fi jeequmsa biyyatti keessatti ummamaan laalchisee odeeffannoo mootummaa irraa aargaachuu beeksisan.
Haalli jiru, lubbuun namootaa darbuun, nu yaaddeessaa, an jedhaan ministirichi, deebii wanni ta'u, ummataaf bilisuummaa caalaa keenuudha malee irraa xinneessuu akka in taanee dubbataniiru.
"Deebiin Ummataaf Bilisummaa Caalaa Kennuudha Malee Irraa Xinneesuu Miti" Haala Itoophiyaa laalchisee Ministirri Haajaa Alaa Yunaaytid ISteets waan jedhan keessaa
Karaa biraatiin cicha Yunaayitid Isteets Afrikaaf qabdu irra-deebi’anii mirkaneessuun dubbatanii jiran. Afrikaa ilaalchisuudhaan, jecha saffuu cabse ammaan dura Prezidaantiin Yunaayitid Isteets – Doonaald Traamp dubbatanii turan irratti qeeqawwan dhihaatanitti xumura gochuuf carraaqqii godhamu keessaa haasaan Tilersen kun tokko tahuu isaa tu dubbatama.
Dippiloomaatichi ol’aanaan Yunaayitid Isteets har’a dura-taa’aa Koomishina Gamtaa Afrika Muusaa Faakii wajjiin walga’anii jiran. Daawwannaa ministaricha dhimma-alaa Yunaayitid Isteets kana ilaalchisee oduu dhaa booda, gabaasaa bal’aa qabna.